Inona no ho hitanao any Córdoba afaka andro vitsivitsy | Vaovao momba ny dia
Izay ho hitanao any Córdoba afaka andro vitsivitsy
Susana Garcia | | Tanànan'ny Espana, Cordova
Cordova, tanàna iray izay manana tantara lehibe ao ambadik'izany, fandresena aman-taonany maro ary fananganana kolontsaina hafa, toa ny Arabo, izay hita ao amin'ireo tranobe mariky ny marika. Tsy misy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo tanjona sarobidy indrindra amin'ny faritra atsimo, miaraka amin'i Granada na Seville, satria tanàna iray izay manana zavatra betsaka hatolotra.
Mampiseho zavatra vitsivitsy anao izahay inona no ho hita any Córdoba raha mandeha andro vitsivitsy fotsiny isika. Ny fijanonana matetika dia fohy amin'ny fialantsasatra, ary noho izany dia tsy maintsy ataontsika ny ankamaroan'ny fitsidihana, mazava tsara ny zavatra ho hitantsika fa tena ilaina. Ity misy lisitra misy vitsivitsy amin'izy ireo.
1 Moske ao Cordoba
2 Tilikambon'i Calahorra
3 Tetezana romana
4 Tempoly romana
5 Alcazar an'ny mpanjaka kristianina
6 Làlan'ny voninkazo
Moske ao Cordoba
La Moske-Katedraly ao Córdoba Izy io dia tranokalan'ny vakoka manerantany hatramin'ny 1984. Raha misy tsangambato tsy tokony hotadiavinao raha mankany Córdoba ianao na mandalo eo akaikiny dia io moskea io satria io no tsangambato manan-danja sy manan-danja indrindra ao amin'ny West West, maneho ny fomban'ny Umayyad. Ao aminy no ahitanao fomba hafa, avy amin'ny faritra kristiana ao amin'ny katedraly, toy ny Baroque na Renaissance, ka lova iray manan-danja ara-tantara sy ara-javakanto. Na dia tsy fantatrao aza ny momba ireo fomba resahintsika, ny fitsidihana dia zavatra tsy mampino, noho ny hatsaran-tarehin'ny habakabany, manomboka amin'ny facades sy varavarana mankany amin'ireo trano fiangonana maro izay ao anatiny. Ny mahaliana ihany koa dia ny Patio de los Naranjos malaza na ny efitrano hypostyle miaraka amin'ireo tsanganana fanta-daza, izay saika nanjary endrika solontenan'i Córdoba.
Ao amin'ny faritra atsimo amin'ny tetezana romana Hitanay ny Torre de la Calahorra, trano miaro tena izay efa hita ao amin'ny lahatsoratra tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Amin'izao fotoana izao, ity tilikambo ity dia manana ny Living Museum of Al-Andalus, miaraka amin'ny fitsidihana maharitra adiny iray ary miresaka ny kolontsaina, ny tantara ary ny fomba fiaina any Al-Andalus. Na dia tsangambato taloha aza izy io, ny marina dia manana fanavaozana sy fomba maro natao nandritra ny taonjato maro izy, noho izany dia mbola voatahiry tsara ihany.
Rehefa mitsidika ny Torre de la Calahorra isika dia afaka mahita ihany koa ny tetezana romana ao Córdoba. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe 'Tetezana Old', ilay hany tokana nisy tao an-tanàna tao anatin'ny taonjato 20, na dia ireo fananganana maoderina indrindra aza. Ny fananganana azy dia nanomboka tamin'ny taonjato voalohany AD tany Guadalquivir. Ny iray amin'ireo te hahafanta-javatra dia ny renirano ihany koa dia miorina amin'ny faritra voajanahary voaaro kely, antsoina hoe Sotos de la Albolafia, noho ny habetsahan'ny karazam-borona monina any, ny sasany ahiana ho lany tamingana.
Na dia mieritreritra aza isika fa any Córdoba dia hankafy ny akanjo soritr'i Al-Andalus fotsiny isika, tsy tokony hohadinointsika fa talohan'io dia ity faritra ity dia resin'ny romana, ary mbola maro ny famantarana ny fandalovany teto. Ity tempoly romana ity dia tsy hita raha tsy tamin'ny taona 50. Ity tempoly ity dia eo ambonin'ny lampihazo ary misy tsanganana enina eo aloha ary folo eo amin'ny sisiny, izay tempolin'i Korinto. Io faritry ny tanàna io dia tsy maintsy napetraka teo anelanelan'ny taonjato voalohany sy XNUMX. A. Ny hitantsika ankehitriny dia ny vokatry ny fanamboarana natao niaraka tamin'ny razana hita tao amin'ilay faritra. Toa tempoly natokana ho an'ny antokon'ny emperora izy io, izany hoe hivavaka amin'ireo amperora masina.
Alcazar an'ny mpanjaka kristianina
Na dia toa tsy toa izany aza dia trano niavian'ny tafika izy io, natsangana nandritra ny alàlan'ny mandan'i Alfonso XI avy any Castile, eo amin'ny trano mimanda Andalusia taloha. Ity ve ilay fonenan'ireo mpanjaka katolika nandritra ny valo taona mahery. Toerana hitsidihana am-pitoniana, miaraka amin'ireo faritra misy hatsarana tsara ao anatiny sy any ivelany, ary miaraka amina fomba aingam-panahy Mudejar. Tilikambo efatra no misy azy io, samy manana ny tantarany avy, toa ny Tower of the Inquisition, izay nitahiry ny arisivan'ny Fanadihadiana Masina. Afaka mitsidika efitrano maromaro sy tokotany anatiny koa isika ao anatiny, zavatra mahazatra any amin'ny trano atsimo. Ny Patio Moorish, ny Patio de las Mujeres na ny Sala de los Mosaicos dia toerana haleha. Fa raha misy toerana tsy tokony hihoarina ao amin'ity trano mimanda ity dia ny Gardens of the Alcazar, toerana midadasika sy manaitra miaraka amin'ny sipres, hazo voasary ary karazan-karazany hafa, tena karakaraina tsara.
Ankoatra ny tsangambato, izay be dia be ao an-tanànan'i Córdoba, misy ihany koa ireo toerana fizahan-tany sy toerana tena izy izay maneho ny kolontsaina Andalosiana ankehitriny. ny lalan-boninkazo Izy io dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra sy fizahan-tany eto an-tanàna. Any Calle de Velázquez Bosco no misy azy, toerana tery izay mankany amin'ny kianja izy io. Sarotra ny mahita azy fa tena mendrika ny mandeha an-tongotra manodidina an'io toerana tsara tarehy feno voninkazo ivelany io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Izay ho hitanao any Córdoba afaka andro vitsivitsy